Miwani Polarkusimuka Free Spirit Wood Bhuruu 24 027 12 - Magirazi ezuva evarume - Magirazi emadzimai evakadzi - THE INDIAN FACE
LENSES POLARKUKUDZIDZA KWAKAWANDA
Magirazi emeso TAC YAKAZARA HD Yakagadzirwa neiyo Yakakwira Tsananguro mizhinji-yakaturikidzana kuti iwane kujekesa kwakakura mune chero mwenje mamiriro. Iwe uchaona ese mavara aine musiyano uri nani uye kuvimbika kukuru.
ULTRA CHIEDZA MUENZANISO
Isu tiri mweya wakasununguka uye ndihwo hunhu hwedu hwakanyanya kukosha. Isu tiri murudo nehupenyu uye isu tinoda kuwana zvakanakisa pasekondi yega yega, sekunge sekupedzisira. Isu tinotiza kubva kune yakasimbiswa tsika, isu hatiteedzere uye isu tinosvetukira kumusoro muzviitiko zvitsva.
The Indian Face® chiratidzo che optics uye zvishandiso zvemahara uye adrenaline-yakachaya mweya. Zvigadzirwa zvevarume, vakadzi nevana. Yakagadzirwa muna 2007 uye pari zvino iri kutengeswa munyika dzinopfuura makumi matatu muEurope, America, Asia neOceania. No rules, no limits, just HIGH ADRENALINE!.
Kubva pane 6 maonero Nyora zvaunofunga